Pulmonary embolism (အဆုတ်သွေးကြောဆို့ခြင်း) - Hello Sayarwon
အဆုတ်သွေးကြောဆို့ခြင်း ဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဖြစ်များသလဲ
ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ သွားရောက်ပြသသင့်ပါသလဲ
အဆုတ်သွေးကြောဆို့ခြင်း ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ
အဆုတ်သွေးကြောဆို့ခြင်း ကို ဘယ်လိုကုသလဲ
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Pulmonary embolism (အဆုတ်သွေးကြောဆို့ခြင်း)
ရေးသားသူ Thin Myat Sandi Cho ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ hellosayarwon.
အဆုတ်ဆီကိုသွားတဲ့အဆုတ်သွေးလွှတ်ကြောတစ်ခုမှာ ပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အများစုမှာ ခြေထောက်မှအဆုတ်ကို သွေးခဲတွေပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အခြားအစိတ်အပိုင်းကလည်းလာနိုင်ပေမယ့် ရှားပါတယ်။
အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရပြီး မေယိုသုတေသနအဖွဲ့တွေ့ရှိချက်အရ ရောဂါအဖြေမသိရသူနဲ့ ကုသမှုမရရှိသူတွေ သုံးပုံတစ်ပုံမှာ သေဆုံးသွားကြပါတယ်။ အသက်၆၀ကျော်တွေမှာ အန္တရာယ်ပိုများပါတယ်။အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အဆုတ်သွေးကြောဆို့ခြင်း ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
သွေးခဲအရွယ်အစားစတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာရယ်၊ နှလုံးအဆုတ်ရောဂါအခံရှိနေခြင်းမရှီနေခြင်းအပေါ်မူတည်ပြီး လက္ခဏာတွေကကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။
အဆုတ်သွေးကြောဆို့ခြင်း ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့-
ဒီလက္ခဏာရုတ်တရက်ထခြင်းက ဖြစ်တတ်လေ့ရှိပြီး အားစိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ပိုဆိုးသွားလေ့ရှိပါတယ်။
နှလုံးရောဂါဖောက်သလိုမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။အသက်ပြင်းပြင်းရှူတဲ့အခါမျိုး၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အစားစားးခြင်း၊နဲ့ ခါးကုန်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။ အားစိုက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ပိုဆိုးလာနိုင်ပေမယ့် အနားပြန်ယူလိုက်ရုံနဲ့ မသက်သာနိုင်ပါဘူး။
သွေးသို့ သွေးနှောနေတဲ့သလိပ်တွေ ပါလာနိုင်ပါတယ်။
မြန်မြန်ရောဂါသိပြီး ကုသမှုပေးခြင်းက အခြေအနေကိုပိုမဆိုးအောင်နဲ့ အခြားကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့် တတ်နိုင်သမျှမြန်မြန် ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပြသသင့်ပါတယ်။
ဘာတွေက အဆုတ်သွေးကြောဆို့ခြင်း ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
သွေးခဲဖြစ်ခြင်းက အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သွေးပြန်ကြောသွေးခဲခြင်းကြောင့် အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သွေးခဲက ခြေထောက်သို့တင်ပဆုံရိုးကနေ စပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက အဆုတ်သွေးကြောဆို့ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
အဆုတ်သွေးကြောဆို့ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
နှလုံးသွေးကြောရောဂါအထူးသဖြင့် နှလုံးလုပ်ဆောင်ရည်ကျခြငးကြောင့် သွေးခဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အချို့သောကင်ဆာများ အထူးသဖြင့်သရက်ရွက်၊ မမျိုးဥအိမ်နဲ့ အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာအများစုမှာ သွေးခဲဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေ ပိုများစေတတ်ပြီး ဓာတုကုထုံးကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေထပ်များနိုငပါတယ်။
သွေးခဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း အဓိကအကြောင်းရင်းများရဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့် အဆစ်ပြန်ပြင်ခြင်းကဲ့သို့ အဓိကခွဲစိတ်မှုတွေမှာ မခွဲစိတ်ခင်ရောခွဲစိတ်မှုအပြီးပါ သွေးခဲမဖြစ်အောင်တားတဲ့ဆေးတွေ ပေးရပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုအပြီ အိပ်ရာထဲလပေါင်းများစွာ အနားယူနေရတတ်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါ၊ ခြေထောက်ကျိုးခြင်း၊ ထိခိုက်မိခြင်းသို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖျားနာခြင်းတွေက သွေးခဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အချိန်အကြာကြီး ခြေထောက်တွေကိုအလျားလိုက်ဆန့်ထားရခြင်းက သွေးပြန်ကြောစီးဆင်းမှုကို ပိုနှေးစေပြီး ခြေထောက်မှာသွေးပုံခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကားပေါ်မှာ ကျဉ်းကျဉ်းကျုတ်ကျုတ်ထိုင်ရခြင်းက ခြေထောက်သွေးစီးဆင်းမှုကို ပိုနှေးသွေားစေပြီး သွေးခဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုခြင်းက သွေးခဲခြင်းကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စနေိုင်ပြီး အထူးသဖြင့်အခြားဖြစ်နိုင်ချေတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်းက သွေးခဲခြင်းကိုပိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ သွေးတိုးရှိတဲ့အမျိုးအသမီးတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးရဲ့အလေးချိန်က တင်ပဆုံရိုးသွေးပြန်ကြောကို ဖိမိပြီး ခြေထောက်ဆီမှာသွေးပြန်စီးဆင်းမှုကို နှေးစေပါတယ်။ သွေးစီးဆင်းမှုပိုနှေးတဲ့အခါဒါမှမဟုတ် သွေးပုံသွားတဲ့အခါမှာ သွေးခဲခြင်းပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်ကသံသယရှိတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ခန`ဓာစစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေနဲပ အခြားစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အဆုတ်နဲ့နှလုံးကို အသေးစိတ်မြင်ရနိုင်ပြီး အဆုတ်တစ်ဝိုက်အရိုးမှာရှိတဲ့ ပြဿနာတွေကိုပါတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ရေဒီယိုလှိုင်းတွေနဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းကိုအသုံးပြုပြီး ပုံရိပ်များအသေးစိတ်ပုံဖော်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆုတ်ကန့်လန့်ဖြတ်ပုံရိပ်တွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ V/Q scanကိုလည်း ပြုလုပ်ရနိုင်ပါတယ်။
အပေါက်သေးသေးဖောက်ပြီး သွေးပြန်ကြောတွေမှာတစ်ဆင့် အထူးပြုလုပ်ထေားတဲ့ကိရိယာကို ထည့်သွင်းကြည့်ရှူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရေဒီယိုလှိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီး သွေးစီးဆင်းမှုကိုမြင်သာအောင်နဲ့ ခြေထောက်မှာရှိတဲ့သွေးခဲတွေကို စစ်ဆေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးကျဲဆေး ဟပ်ပရင်နဲ့ဝါဖရင်က သွေးထဲမှာသွေးခဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ အသက်ကယ်နိုင်ပါတယ်။
သွေးခဲပျော်ခြင်းပျက်စီးခြင်းကို မြန်စေပါတယ်။ ဘေးထွါက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ စိုးရိမ်၇တဲ့သွေးထွက်ခြင်းပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတွက်သာ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
အဆုတ်နှလုံးဆီ သွေးစီးဆင်မှးုကိုတားထားတဲ့ ပြဿနာပေးနိုင်တဲ့သွေးခဲများကို ဖယ်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက အဆုတ်သွေးကြောဆို့ခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့်
အဆုတ်သွေးကြောဆို့ခြင်း ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ခြေထောက်ကို တဖြည်းချင်းညှစ်ထားပေးခြင်းဖြင့် သွေးပြန်ကြာနဲ့ခြေထောက်ကြွက်သားတွေကို သွေးစီးဆင်းမှုကေင်းအောင် ကူညီပေးပါတယ်။
လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေတိုင်းနဲ့ ညမှာခြေထောက်မြှောက်ထားခြင်းက အရမ်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုအပြီး တတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်လှုပ်ရှားခြင်းက အဆုတ်သွေးကြောဆို့ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး မြန်မြန်ပြန်သက်သာသွားနိုင်ပါတယ်။
http://www.healthline.com/health/pulmonary-embolus . Accessed February 7, 2017. pulmonary embolism.
http://www.webmd.com/lung/tc/pulmonary-embolism-topic-overview . Accessed February 7, 2017.
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pulmonary-embolism/manage/ptc-20234821 . Accessed February 7, 2017.